चालू आवको ९ महीनामा आरम्भ माइक्रोफाइनान्सले कमायो ७६ लाख, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी चालू आवको ९ महीनामा आरम्भ माइक्रोफाइनान्सले कमायो ७६ लाख, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
on: May 08, 2019 लगानी
चालू आवको ९ महीनामा आरम्भ माइक्रोफाइनान्सले कमायो ७६ लाख, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
वैशाख २५, काठमाडौं (अस) । चालू आवको ९ महीना (चैत मसान्त) मा आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले रू. ७६ लाख ६७ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २९० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. १९ लाख ६२ हजार नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी २२ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा बढेकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी रू. २ करोड ३६ लाख रहेको छ भने सञ्चालन मुनाफा रू. ८४ लाख ३३ हजार रहेको छ । गत आवमा कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा नोक्सानमा रहेको थियो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६ करोड रहेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. १४ करोड ५८ लाख निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. ४५ करोड ७३ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप ६३ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ५९, प्रतिशेयर आम्दानी रू. १२ दशमलव ७७, मूल्य आम्दानी अनुपात ४९ दशमलव ८०, तरलता अनुपात ८६ दशमलव ७० र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ८ दशमलव ६२ रहेको छ ।
आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको नाफामा वृद्धि
आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको कम्पनी सचिवको राजीनामा स्वीकृत